Matongerwo eNyika, 09 Kukadzi 2019
Mugovera 9 Kukadzi 2019
Kukadzi 09, 2019
Mapurisa Opomera VaChikwinya naVaMukapiko Dzimwe Mhosva?
Mapurisa anonzi akabvunzurudza nhengo mbiri dzeMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa nezuro kwemaawa masere, ndokudzisainisa magwaro ekuda kudzipomera dzimwe mhosva, pamusoro pedzimwe mhosva dzavakabvisira mari yechibatiso.
Varairidzi Voita Mumwe Musangano neSvondo neHurumende
Hurumende iri kusangana zvakare neSvondo nemasangano evarairidzi pachitsvagwa nzira dzekuti varairidzi vadzokere kumabasa.
Gwaro Rinosvibisa MDC Ropihwa Dzimwe Nyika kuMusangano weAfrican Union?
Rimwe bepanhau reku Britain, The Guardian, rabuditsa nyaya inoti hurumende yeZimbabwe ine gwaro rinosvibisa MDC rairi kupa dzimwe nyika kumusangano weAfrican Union uri kuitirwa kuAddis Ababa, ku Ethiopia.
African Union Yokurudzirwa Kupindira Pane Zviri Kuitika muZimbabwe
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti sangano reAfrican Union harisati raratidza kuti riri kushushikana nematambudziko ari muZimbabwe kuburikidza nekunyarara kwarakaita.
Citizens Forum Inoti Icharatidzira kuMuzinda weAmerica neMasangano Akazvimirira
Sangano rinozviti Citizens Forum rinoti richaratidzira kumahofisi emuzinda weAmerica, Zimbabwe Lawyers for Human Rights pamwe neCrisis in Zimbabwe Coalition. Sangano iri rinoti harina kubatwa zvakanaka parakasvitsa nyunyuto dzaro kumahofisi aya.
VaMnangagwa Vokurudzirwa Kukumbira Rubatsiro rweAfrican Union
Mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vasvika kumusangano we African Union kuEthiopia. Mumwe wevatevedzeri vavo, VaKembo Mohadi, ndivo vakafanobata chigaro chaVaMnangagwa apo vanenge vari ku Ethiopia.
Nhengo dzeParamende dzeMDC Dzinosungwa Zvakare
Mumiriri weMbizo mudare reparamende, VaSettlement Chikwinya, pamwe nemumiriri weRedcliffe, VaLloyd Mukapiko, vanonzi vasungwa vachipomerwa mhosva isati yazivikanwa pataenda pamhepo.
Ko Ndiyani Anobata Chigaro Kana VaMnangagwa neVatevedzeri Vavo Vasipo?
Pane mashoko ekuti vatevedzeri vemutungamiri wenyika VaKembo Mohadi naGeneral Constantino Chiwenga vose vari kunze kwenyika uko vari kurapwa
VaMnangagwa Voenda kuAfrican Union Zvinhu Zvakaita Manyama Amire Nerongo
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusimuka nhasi uno vakananga kuAdis Ababa, kuEthiopia, kumusangano weAfrican Union wechimakumi matatu nembiri, kana kuti 32nd Ordinary Session of the African Union.
Zimbabwe Human Rights Forum Inori Vanhu Gumi neVanomwe Vakaurayiwa neMauto
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum raburitsa gwaro rinoratidza kuti vanhu chiuru nemazana masere nevatatu vakatyorerwa kodzero dzavo nevanofungidzirwa kuti mauto, mapurisa nevechidiki veZanu-PF kubva musi wa15 Ndira kusvika musi wa 5 Kurume.
Kukadzi 07, 2019
Masangano Anorwira Kodzero dzeVanhu Otaura Nhanganyaya dzeNhaurirano
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inofanirwa kuiswa pamusoro, yogadziriswa kuitira kuti nhaurirano dzichaitwa munyika dzibudirire.
VaMliswa Vanombosiya Chigaro cheKomiti yeParamende Inobata Migodhi
Mumiriri weNorton mudare reNational Assembly, VaTemba Mliswa, vambosiya chigaro chasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa mushure mekupumhwa huori.